Mockup taratasy fanoratana orinasa | Creatives Online
Ny taratasy fanoratana orinasa dia manondro ny marika marika, na ilay antsoina koa hoe marika manokana. Izany dia momba ny fanaovana ny singa rehetra ao anatin'ny orinasa ho voatonona mitovy ny maha-izy azy, ny maha-izy azy ary ny sanda mahasamihafa. Noho izany, rehefa voatendry hanao izany ny mpamorona iray, ny mockups amin'ny taratasy fanoratana orinasa dia tonga lafatra amin'ny fanolorana endrika satria, amin'izany fomba izany, dia hitany fa tena misy izany.
fa, Inona no mockups ho an'ny orinasa azo ampiasaina? Ao amin'ny Internet ianao dia afaka mahita karazany maro amin'izy ireo, na maimaim-poana na karama. Ary nanao fifantenana ny tsara indrindra, maimaim-poana, mba hahafahanao manolotra ny asanao amin'ny mpanjifanao amin'ny fomba matihanina kokoa.
1 Fa inona no atao hoe mockup?
1.1 Ary ny mockups ny taratasy fanoratana orinasa?
2 Mockups amin'ny fitaovan'ny orinasa maimaim-poana: ny endrika tsara indrindra
2.1 Mockup amin'ny biraon'ny orinasa Desktop
2.2 Famoronana taratasy iray hafa
2.3 Marika mockups
2.4 Mockup taratasy
2.5 Minimalist mockup
2.6 Mockup tena misy
2.7 Mockup miloko
2.9 Mockup fitaovana fanoratana fototra
2.10 Mockup taratasy fanoratana orinasa
Fa inona no atao hoe mockup?
Azontsika atao ny mamaritra ny mockup ho toy ny fanehoana ny endrika natao tamin'ny fitaovana fanitsiana sary amin'ny fomba izay toa "tena izy". Izany hoe atolotra anao sary manahaka ny zava-misy.
Ohatra, alaivo sary an-tsaina hoe asaina manao kara-pandraharahana ianao. Raha tokony asehonao azy ny endrika, ny zavatra ataonao dia ny mampiseho azy sary misy kara-pandraharahana maromaro misy ny endrika nataonao. Amin'izany fomba izany, ny mpanjifa dia afaka mahazo hevitra tsara kokoa momba ny mety ho endriky ny tena izy raha manonta ny endrikao izy ireo.
El Ny tanjon'ny mockups dia ny hanampy ny olona hahita ny vokatra farany amin'ireo endrika natao, amin'ny fomba ahafahanao mahita lesoka, nuance na mijery fotsiny ny endriny.
Ary ny mockups ny taratasy fanoratana orinasa?
Ny sarin'ny orinasa iray, na an-tserasera na ara-batana, dia miha-zava-dehibe. Raha ny marina dia afaka milaza izany isika kara-pandraharahanao manokana aza izy io ary tsy maintsy aseho eny rehetra eny: tambajotra sosialy, tranokala, singa ara-batana (kajy, karatra fandraharahana, penina, sns.).
Noho izany antony izany, ny mockups amin'ity karazana ity dia ampiasaina hanehoana amin'ny orinasa ny endrika amin'ny singa azo ampiasaina mba hahitany ny vokatra azony.
Mockups amin'ny fitaovan'ny orinasa maimaim-poana: ny endrika tsara indrindra
Rehefa nazava tsara ny atao hoe mockups sy ny maha-zava-dehibe azy ireo ho an'ny mpanjifa ary eny fa na dia ho an'ny mpamorona aza, fotoana izao hampahafantatra anao hoe iza no endrika maimaim-poana tsara indrindra hitanay tao amin'ny Internet.
Mockup amin'ny biraon'ny orinasa Desktop
Raha manontany anao andian-dahatsoratra ny mpanjifanao endrika ho an'ny singa birao, toy ny taratasy taratasy, kaopy, solomaso, penina, karatra fandraharahana, sns. mety ho safidy izany.
Olana tokana ihany no hitantsika dia ny hoe toa mainty sy fotsy ilay izy, ka raha loko ny logo dia tsy ankasitrahana tsara. Ho setrin'izany dia manana fomba fijery 9 samihafa izay manampy anao hahazo hevitra tsara kokoa.
Famoronana taratasy iray hafa
Amin'ity tranga ity mandeha miaraka amin'ny kahie, taratasy, fandaharam-potoana, sns. Eto ianao dia afaka mahita endrika be pitsiny kokoa, ary amin'ny loko, izay tianao foana.
Na izany aza, ity mockup ity dia hifantoka bebe kokoa amin'ny orinasa matotra kokoa satria ny ambadiky ny sary amin'ny ankapobeny dia maizina ary raha "fotsy" na mavitrika kokoa ny orinasa dia afaka manao fahadisoana ianao rehefa manolotra ny tetikasa.
Somary madio kokoa izany, saingy tokony hotadidinao fa misy singa vitsivitsy ihany izy io: taratasy taratasy, valopy, lahatahiry ary karatra fandraharahana (eo anoloana sy aoriana).
Toa mamiratra kokoa noho ny nasehonay anao teo aloha izy io, fa raha nangatahana singa fanampiny ianao dia ho fohy.
Raha niresaka teo aloha isika fa ny endrika teo aloha dia tena minimalist, amin'ity iray ity dia manana ny zava-drehetra ianao. Ary eo amin'ireo singa amin'ny fitaovan'ny orinasa dia tsy isalasalana fa saika hita taratra eto daholo izay rehetra azonao eritreretina fa ilaina. Ny tsara indrindra dia fotsy ny lamosina ary manome anao fahitana miaraka amin'ny zoro samihafa amin'izany rehetra izany.
Mazava ho azy fa manota amin'ny zava-misy izany manolotra azy ireo fa tsy amin'ny toe-javatra "realiste"., toy ny hoe eo ambony latabatra, na mitondra azy amin'ny olona. Na izany aza, ity endrika ity dia tena mahafinaritra.
Amin'ity tranga ity dia toa toy ny hoe mitsingevana eny amin'ny rivotra ireo singa orinasa. Manana taratasy ianao, valopy (eo anoloana sy aoriana), karatra fandraharahana (eo aloha sy aoriana) ary lahatahiry iray.
Tena tsotra izany, fa ho an'ireo endrika izay angatahana ireo singa ireo dia mety ho tonga lafatra ny mahita ny napetraka.
Mockup tena misy
Tena tianay ity iray ity satria, na dia izany aza manolotra antsika amin'ny endrika minimalista (miaraka amin'ny singa vitsivitsy), eny, manao izany amin'ny tena izy, afaka mahita azy saika toy ny efa azo nilalao.
Amin'ity tranga ity, azonao atao ny manafina na mampiseho ireo singa tianao, manala na mametraka azy ireo amin'ny sitrapo, ary koa ny loko afara.
Amin'izany fomba izany dia hanolotra a fijerena ny zava-drehetra mandrafitra ny marika. Mazava ho azy fa tadidio fa ny famelabelarana tsara dia mety hahatonga azy ireo hanaiky ny famolavolana koa.
Miaraka amin'ny Sary 8 ahafahanao mijery ny mpanjifa amin'ny fomba fijery samihafa ary ny sary ireo endrika noforoninao dia hisarika ny saina, indrindra amin'ny endrika miloko satria, miaraka amin'ny fiaviana fotsy, dia hisongadina kokoa izy ireo.
Mockup fitaovana fanoratana fototra
Amin'ity tranga ity dia mifantoka amin'izay mety ho karatra fandraharahana, valopy, taratasy ary lahatahiry. Saingy amin'ny fametrahana ny singa rehetra, ny iray eo ambonin'ny iray, dia miteraka vokatra mahafinaritra izay ahafahanao mahita ny mety ho fiantraikan'ny maso.
Izy io koa dia manana Sary maromaro hijerena azy amin'ny zoro sy famelabelarana samihafa.
Raha mifandray amin'ny akanjo na fivarotana ny orinasan'ny mpanjifanao, dia mety ho safidy tsara izany hanehoana ny endrikao. Ary izany no azonao atao mamolavola ny kitapo, t-shirt, taratasy ary karatra fandraharahana.
Ao amin'ny Internet ianao dia afaka mahita endrika maro samihafa arakaraka izay nasainao ho an'ny taratasy. Ny zava-dehibe indrindra amin'ity tranga ity dia ny fisafidianana ny mockups amin'ny taratasy ho an'ny orinasa izay mifanaraka tsara amin'ny toetra izay tian'ny orinasa homena, satria raha misafidy ny tsy mety ianao, na dia tsara toy inona aza ny endrika, dia tsy ho hita izany ary azo atao izany. mahatonga anao tsy maintsy mamerina ny dingana. Misy fisalasalana momba izany ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Mockup taratasy fanoratana orinasa